मुख्य Archives - Page 107 of 135
जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउने चेतावनी सहित आन्दोलनमा
माघ ०४, २०७४ BNNTV
काठमाडौ । बुधबार सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम रुपन्देहि तोकेपछि प्रदेश नं ५ को राजधानी दाङ हुनुपर्छ भन्दै दाङमा आज पनि आन्दोलन जारी राखेका छन । आन्दोलनकारीले दाङ मा बन्द गरेका …
अनसन तोडे लगत्तै न्यानो बाँड्न तराई झरे डा. केसी
काठमाडौँ । केही दिन पहिले सम्म अनशनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्ना साथ तराईका साथ शीतलहर प्रभावितलाई न्यानो बाँड्न रौतहट पुगेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको विकृति र विसंगतिका विरुद्ध लड्दै आएका डा. …
दिपायलमा आन्दोलनकारीले गरे प्रहरी चौकीमा आगजनी
काठमाडौ । प्रदेशको राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका दिपायल वासीले दिपायल स्थित कुलपाटेमा रहेको ट्राफिक पोष्टमा आगजनी गरेका छन । जस्ताले बारेर बनाइएको घरमा राखिएको ट्राफिक पोस्ट जलेर पुरै जलेर …
याैनधन्दाकाे अखडा रत्नपार्कको फेरियो रुप, ६ महिनाको कमाइ ५९ लाख
सिटन पुरी रत्नपार्क भन्ने बित्तिकै धेरैलाई लाग्न सक्छ यौनधन्दा गर्नेहरुको अखडा नै हो । तर आजभोलि त्यसको रुप मात्र होइन नाम समेत फेरिएको छ जुुन धेरैलाई थाहा छैन । सधै …
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा ल्होछारको शुभकामना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोनम ल्होछार–२०७४ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तामाङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको …
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमाले-माओवादीले टुङ्गाए सिट बाँडफाँड: कसले पायो कति सिट ?
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लाग सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएका छन्। अब पार्टी नै एकता हुने भएपछी सिट बाँडफाँड त गौण कुरा भएको बताएका संयुक्त …
‘छ लेन’ सडक निर्माण रोकियो: यस्तो छ कारण
धनगढी । सडक क्षेत्रभित्र बनाइएका घरलगायतका संरचना भत्काउने विषयमा उत्पन्न विवादपछि धनगढी क्षेत्रमा निर्माणधीन ‘छ लेन’ सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । विवादकाबीच तत्कालीन धनगढी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेर बनाइएका …
मन्त्रीपरीषद्ले तोक्यो प्रदेशको मुकाम र प्रदेश प्रमुख
काठमाडौ । बुधबार दिउशोँ बसेको मन्त्रीपरीषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको राजधानी तोकेको छ । लामो समयदेखि विवाद रहेको सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको हो। कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर …
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले तोकिएको समयमै राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज पार्टी मुख्यालयमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न ढिलाइ गरिरहेको …
राष्ट्रयसभा निर्वाचनका लागी माओवादी एमालेले गरे सिट बाँडफाड, कसलाई कति सिट ?
काठमाडौ । यही माघ २४ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागी एमाले माओवादीले सिट बाँडफाड गरेका छन । एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाका ५६ मध्ये ४३ सिटमा उम्मेदवारी दिने …